Mumwe mukomana akasvika pane imwe kambani pakanga pakaiswa chikwangwani chakanyorwa kuti Basa Pano, achibva apinda achiti ndazoriwana zvino, akasvika parisopusheni achibva anzi aende kwameneja, akasvikobvunzwa nameneja kuti aida basa rei iye ndokuti, " RR will be fine", pa aireva kuti rese - rese.
Vamwe blazo vaiva mahobho/guard vakabatwa vakavata on duty. Pavakanzwa boss ava kuti "Iwe Peter!!!", dzakabva dzati "Amen"
murungu mahobho hudhu
Hokoyo mupfana Hokoyo
Mumwe mufana akapinda muchitoro ndokubva aba mabiscuits muradio maiimbwa
song inonzi "maDebhura" by Thomas Mapfumo yainzi "Hokoyo mupfana hokooooyo!".
Iye mfana ndokufunga kuti aonekwa, ndokubva atanga kuimba achiti: "ndadzosera mukoma ndadzoseeeera."
mbavha mapfumo mupfana
mbavha malawi sekuru chitima
bhurugwa baba mai next door
Mapurisa (ZRP) wasu mwana